Ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Watch Active dia ho hita amin'ny habe roa | Androidsis
Smartwatches, tsikelikely, dia nanao zana-kazo manan-danja eny an-tsena ary mahazatra ankehitriny ny mahita azy ireo eo an-tanan'ny mpampiasa maro. Na izany aza, tsy ny mpamokatra rehetra no toa miloka amin'ny fandefasana maodely roa samy hafa habe mifanaraka amin'ny haben'ny tanan'ny olona, na lahy na vavy.
Apple no mpanamboatra voalohany namoaka kinova roa samy hafa, 38 sy 42mm (nidina hatramin'ny 40 sy 44mm avy izy ireo izao). Samsung dia nandefa ilay modely hafahafa amin'ny habe samihafa, saingy tsy matetika. Miaraka amin'ny fanombohan'ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Watch Active2, mazava ny orinasa: Ho hita amin'ny kinova roa izy io.
Ny Samsung Galaxy Watch Active dia nidona tamin'ny tsena tao anatin'ny telo volana lasa izay, ary nanomboka tamin'io daty io, ny Koreana dia miasa amin'ny izay ho ny taranaka faharoa. Ireo tovolahy avy ao amin'ny SamMobile dia nanana ny fahazoana sary manokana momba izay ho ity taranaka faharoa ity mamela antsika hanana hevitra momba izay ho avy.
Ny iray amin'ireo teboka ratsy atolotry ity maodely ity dia ny tsy fisian'ny bezel mihodina izay ahafahantsika mivezivezy amin'ny menio tsy mila mifanerasera amin'ny efijery, bezel izay mifantoka amin'ny maodely avo lenta kokoa amin'izao fotoana izao. mbola tsy ho hita ao amin'ny Active2 io.
Araka ny hitantsika amin'ny sary navoakan'ity mpampita vaovao ity dia afaka mahita ihany koa isika bokotra roa amin'ny ilany ankavanana, na dia ny efa lasa ambony indrindra aza dia efa-joro ary ny ambany kosa misy fetra mena. Amin'ny lafiny iray dia sady misy mpandahateny no mikrô.
Fa ny zava-baovao farany amin'ity taranaka faharoa ity dia Tonga amin'ny habe roa izy: 40 sy 44 mm. Raha ny fantatra dia hanana Wi-Fi sy kinova LTE ihany koa izy io. Ny kinova LTE dia hanana batterie 340 mAh raha ny kinova Wi-Fi kosa hahatratra 237 mAh. Ireo maodely roa ireo dia hanana 1,5 GB RAM ary 4 GB fitehirizana anatiny. Ny kinovan'ny rafitra fiasa dia One UI 1.5, kinova mandroso kokoa noho izay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Galaxy Watch Active izay eny an-tsena amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny taranaka faharoa an'ny Galaxy Watch Active dia ho hita amin'ny habe roa
Etazonia dia hanainga ny veto amin'ny Huawei
Eden iray hafa dia RPG amin'ny endrika mahazatra indrindra izay tsy mandiso fanantenana